अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड « Drishti News – Nepalese News Portal
अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं, २७ भदौ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले अनलाइन शिक्षण सिकाईलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मन्त्री गुरुङले इन्टरनेटको दुरुपयोगबाट बालबालिकाहरु ‘डिजिटल दुव्र्यसनी’ मा फस्न सक्ने सम्भावना भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र निर्देशिका बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेका उल्लेख गर्दै आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो ।
५४औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रिय बालदिवसको अवसर पारेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समिति, संस्थागत विद्यालय विभागले शनिबार आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले कोरोना भाइरसले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असरबाट निराशन हुन पनि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले कोभिड–१९ को बहानामा विद्यार्थीहरुको एउटा शैक्षिकसत्र खेर जान दिन नहुनेतर्फ समेत सचेत गराउनुभयो । उहाँले शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकार कसैले पनि कोभिडको बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
ओली कुन अवस्थामा हट्लान् ?
काठमाडौं । ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नहुने पक्षमा माओवादी मात्र होइन, कांग्रेस र जसपाका नेताहरुसमेत
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन उपलब्धिविहिन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा
पद जोगाउन मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा !
काठमाडौं । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सबा तीन घण्टा नबित्दै सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘चुनाव तयारीको दस्तावेज’सरह !
काठमाडौं । धेरैलाई चासो छ– राजनीति अब कता जान्छ ? एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी